कोरोनाको सन्त्रास, उपत्यकाका सहर सुनसान प्राय,के भन्छन् त व्यवसायी ? (फोटो फिचर) « Sansar News
कोरोनाको सन्त्रास, उपत्यकाका सहर सुनसान प्राय,के भन्छन् त व्यवसायी ? (फोटो फिचर)
२४ फाल्गुन २०७६, शनिबार १६:१३
२४ फागुन, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएसंगै राजधानी काठमाडौमा चहलपहल निकै घटेको छ । चहलपहल घटेसंगै, होटलहरुमा जाने ग्राहकको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको संचालकहरुले बताएका छन् ।
यस्तै सार्बजनिक सवारी साधनको संख्या पनि घटेको छ । बागबजार, रत्नपार्क, ठमेल, असन, इन्द्रचौक, बसन्तपुर, न्यूरोड लगायतका अति ब्यस्त रहने क्षेत्रहरु सुनसान प्राय देखिका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो २.३० बजे रत्नपार्कमा गाडी कुर्दै सर्बसाधारण
भोटाहिटीमा देखिएको चहलपहल, व्यवसायीका अनुसार यो चहलपहल सधै भन्दा कम हो ।
सुनसन प्राय काठमाडौं वटुको होलसेल बजार । प्राय व्यस्त रहने यो बजा शुक्रबार तीन बजे सुनसान थियो ।
ब्यापार ब्यबसाय गर्ने मानिसहरु ग्राहकको प्रतिक्षामा बसेकाछन । तर चहलपहल नहुँदा प्रायः मोबाइलमा ब्यस्त देखिए । मोबाईलबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने, गेम खेल्ने भिडियो हेरेर दिन कटाउने गरेको अधिकांसको भनाई छ ।
काठमाडौंको वसन्तपुर दरबार क्षेत्र पनि सुनसान नै छ । अधिक मात्रामा बिदेशि पर्यटकहरुको जमघट हुने सो ठाउँमा छिटफूट रुपमा बिदेशि पर्यटकहरु देखिए । काठमाडौं महनगरपलिकाले प्रत्यक्ष निगरानी गर्दै आएको उक्त ठाउँमा खटाईएका महानगर कर्मचारिहरुले भने भाइरससंग सम्बन्धीत सुरक्षात्मक उपायाहरु नअपनाईएको पाईयो । माहनगरपलिकाले मास्क तथा सेनिटाईजरको प्रबन्ध नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
बिदेशि पर्यटकहरुको आगमनमा ४० प्रतिशत ह्रास आईसकेको पर्यटनसंग सम्बद्ध बिज्ञहरुले बताएका छन ।
बजारमा सुरक्षात्मक मास्कको अभाब छ । कपडाबाट बनेका मास्कहरु पनि साविक मूल्य भन्दा महंगोमा बिक्रिबितरण भैरहेका छन । मास्क बनाउने कच्चा पदार्थको स्रोत पनि चीन नै भएकोले अहिले कच्चा पदार्थको अभाब छ । त्यहि भएर मक्सको बजार भाउ पनि दोब्बरले बढेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
“मास्कको सटेज छ,,यो भर्खरै आई पुगेको कपडाको जाली मास्क पनि २० रुपैंयाँमा बेच्नुपर्ने भएको छ ।”महाबौंद्धमा मास्ककोे होलसेल व्यापार गर्दै आएकी एक व्यवसायीले भनिन् -यो मास्क पहिला १० रुपैयांमा बेच्थ्यौ ।”
बजारमा सुरक्षित मास्क र स्प्रिटयुक्त सेनिटाईजरको अभाब छ । केहि व्यवसायीले शुक्रबार बेलुकासम्म सेनिटाईजर उपलब्ध हुने बताए ।
काठमाडौंको महाबौद्धमा चीनबाट आयतहुने तयारी कपडा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स सामाग्री लगायतको होलसेलबजारको रुपमा परिचित छन् । त्यहाँपनि सुनसान नै देखियो । ‘चीनबाट सामान आएको छैन । मानिसको चहलपहल पनि छैन ।’ ब्यबसायी सागर पौडेलले भने “ब्यापार चौपट्ट छ, यस्तो अबस्था त ७२ को भुइचालोको बेला पनि थिएन ।” पौडेल विगत १५ वर्षदेखि माहाबौद्धमा मोवाइलका सामाग्रीहरुको ब्यापार गर्दै आएका ब्यबसायी हुन् ।
अस्पतालहरुमा पनि मानिसहरुको चहलपहल कम भएको देखिन्छ । काठमाडौको सरकारी अस्पताल बिर अस्पतालमा बिगतका दिनहरुमा भन्दा चहलपहल कम भएको एक सूरक्षा गार्डले बताए । प्राय भिडभाड हुने अस्पताल र आसपासका औषधी पसलहरु समेतमा न्यून चहलपहल देखिन्छ ।
दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्न र तरकारी पसलमा भने भिडभाड छ । मैतीदेवीमा किराना होलसेल पसल गर्ने पुष्प कार्कीको अनुभबमा बिगत ५ दिनमा अत्यधिक व्यापार भएको छ । ‘यति धेरै ब्यापार भएको छ की, समान बेच्न पनि भ्याइ नभ्याई छ ।’ कार्कीले भने ।
हल्लाका कारण मनिसहरु खाद्यान्न तथा इन्धनको जोहो गर्नतिर लाग्दा समग्र अर्थतन्त्र नै एकपाटे हुने अबस्था सृजना हुने अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ । सोमबार मात्र हल्लैहल्लाका बिच राजधानीका कतिपय ठाउँमा ग्याँस सिलिण्डरको लाईन लाग्ने अवस्था सृजना भएकोछ ।
एसियाली बिकास बैंकले कोरोना भाइरसका कारण विश्वको आर्थिक बृद्धि ०.१ देखि ०.४ प्रतिशत सम्म घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि करिब चार अरबको क्षति पुग्न सक्ने उसको आँकलन छ ।